Archive du 20180804
Vono olona sy fanolanana Faty 2 nariana teny Tanjombato
Olona roa izay lehilahy sy vehivavy no indray hita faty teny amin’ny Ranon’Ikopa teny amin’ny fefilohan’i Soavina manakaiky an’i Tanjombato omaly vao maraina.
Kandida mampiasa volabe Ahiana hanakorontana vao tsy lany eo
Tsy misy resaka ny fanaraha-maso ny vola hampiasain’ny kandida amin’ny fifidianana, ary tsy resahina intsony ilay soso-kevitra hametra ny vola azo ampiasaina, izay tokony hatao lalàna.
Jean Nirina- HAFARI Tsy ho kandida indray
Tsy ho kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahina ny 7 novambra ho avy izao indray Rafanomezantsoa Jean Nirina, filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy.
Dian-dRajaonarimampianina tany Madirovalo Mahalasa saina ihany !
Ny taona 1972 no nalefa “stazy” tany Madirovalo, tanàna iray any Ambatoboeny, ry Dama ao amin’ny tarika Mahaleo sy ireo mpianatry ny oniversite niaraka taminy tamin’ny fotoan’androny, raha ny fanazavan’ity mpanakanto anisan’ny ho kandida filoham-pirenena ity.
Andry Rajoelina Manao ririnin-dasa tsy tsaroana
Nanongam-panjakana i Andry Rajoelina ny taona 2009, ary maro ny fahapotehana ara-toekarena sy ara-piarahamonina naterany, izay tsy voaarina ankehitriny ary tsy mbola voafafa ny ratram-po navelan’ny fandrobana sy ny faty olona.
Jean Ravelonarivo Kandida faharoa nanatitra antontan-taratasy
Niditra amin`ny andro fahatelo amin`ny fanaterana ireo antontan-taratasy filatsahan-kofidiana filoham-pirenana omaly. Kandidà faharoa nametraka ny azy tetsy amin`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) i Jean Ravelonarivo.
Ajesaia U 16 Handray anjara amin’ny “Gothia Cup China”
Handray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin’ny baolina kitra antsoina hoe “Gothia Cup China”, hatao any Chine ny 7 ka hatramin’ny 21 aogositra ho avy izao, ny ekipan’ny AJESAIA- U16.
Baolina kitra « Poule des As 2018 » Niova indray ny fandaharan-dalao
Niova indray ny fandaharan-dalao fanombohana ny lalao baolina kitra « Poule des As 2018 » amin’ny fiadiana ny « Thb Champion’s League Malagasy ».
Tsy tena izy ?
Kivadivady, kivarivary, kiantranoantrano, sy ny hafa koa dia samy hamaritana zava-mitranga na iniana hatranga ao anatin’ny fiarahamonina Malagasy avokoa raha toa ka vazivaziana na tsy raisina am-pahamatorana.
Lamasinina nivadika tao Andekaleka Mpandeha 2 maty, 8 naratra
Tra-doza teo amin'ny PK206+600, mifanandrify amin’ny Toby famokarana herinaratry ny Jirama ao Andekaleka ny lamasinina iray an’ny orinasa Madarail antsoina hoe “Diasoa”
Minisiteran’ny Indostria Hamaha ny olan’ireo orinasa madinika
Nanomboka omaly zoma 03 aogositra tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny hetsika fampirantiana orinasa madinika sy salantsalany. 2 andro ny hetsika ary hanome sehatra tanteraka ny tontolon’ny fandraharahana.
Fanadinam-panjakana Misy mbola tsy milamina…
Tsy nahafa-po anay ny vahaolana natolotry ny fanjakana mikasika amin'ny fitakiana izay nataonay efa telo volana mahery, hoy ny fanambaran’ny mpampianatra omaly 3 aogositra.
Troupe Jeannette Hiaka-tsehatra etsy amin’ny AFT Andavamamba rahampitso
Hamerina indray ao am-pon’ny olona ny fitiavana ny tantara tsangana ny Troupe Jeannette amin’izao fiandohan’ny volana aogositra izao,
Fanomanana fanadinana Mahomby kokoa ny fianarana amin’ny horonantsary
Amin’izao ankatoky ny fanadinana CEPE, BEPC, BACC izao dia manolotra an’ireto « Films Educatifs » na horonantsary fanabeazana hoenti-manampy ny mpianatra ny Lycée Privé Fitarikandro Andravoahangy, izay ahitana ny taranja tantara, jeografia sy SVT ho an’ny kilasy faha-7, faha-3 ary ny kilasy famaranana.
Hetsiky ny olom-pirenena leo vidim-piainana miakatra “Tsy mandeha irery izahay !”
Etsy amin’ny gara Soarano no hifampitaona amin’ireo rehetra mpanara-dia azy ireo anio ny avy eo anivon’ilay hetsiky ny olom-pirenena leo vidim-piainana miakatra na MCI.
Centre Malgache de la Canne et du Sucre - CIRAD Hiara-kiasa hampiromborobo ny voly fary
Miroso avy hatrany amin’ny fijerena ifotony ireo toerana heverina fa afaka mamokatra fary eto Madagasikara ny Tale jeneraly vaovan’ny Centre Malgache de la Canne et du Sucre (CMCS), Rakotomalala Miharisoa, izay rantsana eo anivon’ny minisiteran’ny Indostria.